သတင်း Archives - Page2of7- Khitalin Media
ညနေ ၃နာရီခန့်က ဘဏ်ကို ငွေလာထုတ်ယူသူတစ်ဦးက KBZ ဘဏ်တွင် ငွေရေတွက် စစ်ဆေးလိုက်သောအခါ သိန်း ၅၀၀၀ နီးပါး အလွဲသုံးစားလုပ်ထားခြင်းခံရ
May 22, 2020 Khitalin Media 0
တစ်သောင်းအုပ်တွင် တစ်ထောင်တန်များ အစားထိုးထည့်ထားပြီး သိန်း ၅၀၀၀ နီးပါး အလွဲသုံးစားလုပ်သည့် ဘဏ်ဝန်ထမ်းကိုဖမ်းဆီး ကျပ်တစ်သောင်းတန်အုပ်တွေမှာ တစ်ထောင်တန်တွေ အစားထိုးထည့်ပြီး သိန်း ၅၀၀၀ နီးပါး အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တဲ့ ဘဏ်ဝန်ထမ်းကို ဖမ်းဆီးအရေးယူထားတယ်လို့ ရွှေဘိုမြို့မရဲစခန်းထံမှ သိရပါတယ်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရွှေဘိုမြို့ရှိ KBZ ဘဏ်ခွဲ ၁ မှဝန်ထမ်းတစ်ဦးဟာ […]
ဗစ်တိုရီးယားနဲ့ သိန်း၈၀၀ အသံဖိုင်ကိစ္စ လင်းလင်းကိုယ်တိုင် ရှေ့နေကြီးအိမ်အထိ ဒဲ့သွာရှင်းပြီဗျာ…
May 21, 2020 Khitalin Media 0
“ဗြောင်လိမ်ဗြောင်စား ရှေ့နေကြီးပါလား သူနဲ့ဂိုလ်ရှယ်လေးအတင်းချထားတဲ့အသံဖိုင်ကို ကျုပ်ကပဲ လုပ်ကြံဖန်တီးထားတယ်ဆိုပဲ ကျုပ်အကောင့်ကတင်တာသူတို့သိပီး ရက်၂၀လောက်ရှိမှ ငြိမ်နေလို့ သိအောင်ထပ်တင်ပေးတာပဲရှိတယ် ရှေ့နေတယောက်ဖြစ်ပီးမုသားတွေအရမ်းပြောလွန်းတယ် အံသြစရာကြီးဟေ့” Han Nyain OO Unicode “ဗွောငျလိမျဗွောငျစား ရှနေ့ကွေီးပါလား သူနဲ့ဂိုလျရှယျလေးအတငျးခထြားတဲ့အသံဖိုငျကို ကြုပျကပဲ လုပျကွံဖနျတီးထားတယျဆိုပဲ ကြုပျအကောငျ့ကတငျတာသူတို့သိပီး ရကျ၂ဝလောကျရှိမှ ငွိမျနလေို့ သိအောငျထပျတငျပေးတာပဲရှိတယျ ရှနေ့တေယောကျဖွဈပီးမုသားတှအေရမျးပွောလှနျးတယျ […]
ဒေးဗဈလားအတှကျ အတိုငျးမသိ ဝမျးနညျးမိသလို ဂုဏျလဲယူပါတယျဆိုတဲ့ L ဆိုငျးဇီ…/
အသံအားကောငျးကောငျးနဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို သီခငျြးတဈပုဒျထဲနဲ့ စှဲဆောငျနိုငျခဲ့တဲ့ အဆိုတျော Lဆိုငျးဇီ က အမွဲပြျောပြျောနတေကျသူဖွဈသလို သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာလဲ သူရဲ့ လှုပျရှားမှုပုံရိပျတှနေဲ့အတူပြျောစရာလေးတှကေို သာဝမြှေလရှေိ့ပါတယျ။ သို့ပမေယျ ယနမှေ့ာတော့ သူ့ရဲ့ ဆရာအတှကျ စိတျမကောငျးဖွဈရတဲ့အကွောငျးကို ရိုးရှငျးစှာ ရေးသားဖျောပွခဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒါကတော့ ” တျောရုံတနျရုံ ကြှနျမ စာရေးပွီး […]
“ကျော်ဝင်းသန့်၏ မိသားစုများ မိတ္ထီလာမြို့မှာ မနေရဲတော့၍ အဝေးတစ်နေရာကို ထွက်သွားပါတော့မယ်”
“ကျော်ဝင်းသန့်၏ နောက်ခံမိသားစုများ မိတ္ထီလာမြို့မှာ မနေရဲတော့၍ အဝေးတစ်နေရာကို ထွက်သွားပါတော့မယ်” ဟုဆို မေ (၂၀) AlinnMyay(အလင်းမြေ) ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီးနှင့် သံဃာတော်များကို စော်ကားရေးသားမိသူ ကျော်ဝင်းသန့်ရဲ့ ညီဖြစ်သူမှ မိတ္ထီလာဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး အခုလိုရေးသား ဖြေရှင်းထားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ “ကျွန်တော့်အကိုဟာ တရားဥပဒေရဲ့ ဆုံးမမှုကိုခံယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ လိုင်းပေါ်မှာ တစ်ချို့မဟုတ်မမှန်သတင်းတွေနဲ့ […]
ယနေ့နံနက် ၂နာရီ၃၀မိနစ်အချိန်ခန့်တာမွေ အရိုးကုန်းရပ်ကွက်ဦးလွန်းလမ်းထိပ့်တွင် ၄ထပ်တိုက်တလုံးပြိုကျမှု့ဖြစ်ပွား
ကနဦး သတင်း ယနေ့နံနက် ၂နာရီ၃၀မိနစ်အချိန်ခန့်တာမွေ အရိုးကုန်းရပ်ကွက်ဦးလွန်းလမ်းထိပ့်တွင် ၄ထပ်တိုက်တလုံးပြိုကျမှု့ဖြစ်ပွားကြောင်းကနဦး သတင်းရရှိသည်။ ရန်ကုန်တိုင်း တာမွေမြို့နယ်- အရိုးကုန်းလမ်းနှင့်ဦးလွန်းလမ်းထောင့် အုန်းသီးခြစ်ဆိုင်ရှိတဲ့လေးထပ်တိုက်ပြိုကျ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဆောင်နေဆဲအသက်ဘေးအန္ဒရယ် ကင်းကြပါစေ Photo credit တိုက်ပြိုကျမှုဖြစ်စဉ် ၊YRO မှကူညီကယ်ဆယ်ခြင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တာမွေမြို့နယ်၊အရိုးကုန်းရပ်ကွက်၊ အရိုးကုန်းလမ်း နှင့် ဦးလွန်းလမ်းထောင့် ရှိ အမှတ်(၅ […]
ရင်လေးဖွယ်ရာ မုဒိမ်း မျိုးဆက်တွေ ရဲ့သားကောင်ဖြစ်နေရတဲ့ ကလေးငယ်တွေပါလား.နော်..
May 20, 2020 Khitalin Media 0
မုဒိမ်း အမွေ May 19.,2020 ထိုင်းနိုင်ငံ Korat ခရိုင် က နာမည်ကြီး တက္ကသိုလ်မှာ ပညာ ပေးနေကြတဲ့ ကျောင်းဆရာ နဲ့ဆရာမ မိသားစု အမှတ်တယ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓါတ်ပုံပါ ။ ခင်ပွန်းသည် ဟာ နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်ပြီး […]
၁၆.၅.၂၀၂၀ နေ့ ညက မူဆယ်ကလာတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်…/
May 18, 2020 Khitalin Media 0
မမမ ၁၈.၅.၂၀၂၀ ၁၆.၅.၂၀၂၀ နေ့ ညက မူဆယ်ကလာတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် မြစ်ကြီးနားဘူတာမှာ သူ့ကို လာကြိုတဲ့သူက ယောကျာင်္းလေး ၅ ယောက်ရှိတယ် တခြားရပ်ကွက်ကခြားတွေပေါ့ အဲယောကျာင်္းလေး ၅ ယောက်က တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မသိကြဘူး ကောင်မလေးကို လာကြိုကြတာတဲ့ ဘာတော်လဲ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေသေချာစိစစ်မေးတော့ လိုင်းပေါ်က […]
လင်ကြီး က အလုပ်ကအပြန် မိန်းမနဲ့ လင်ငယ် ချစ်ရည်လူးနေကြတာ ပက်ပင်းမိလို့ လမ်းမပေါ်စွဲထုတ်ပြီး—- ဖြစ်ရပ်
May 17, 2020 Khitalin Media 0
လင်ကြီး က အလုပ်ကအပြန် မိန်းမနဲ့ လင်ငယ် ချစ်ရည်လူးနေကြတာ ပက်ပင်းမိလို့ လမ်းမပေါ်စွဲထုတ်ပြီး သတ်ပစ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်…. ထိုင်းနိုင်ငံ SAMRONGTAI ပြည်နယ် OLD RAILWAY RD မြို့တွင် Wasi Yongchaiyudh အမည်ရှိ အမျိုးသားသည် သူ၏ဇနီး Thunyarat Sathianthai နဲ့နောက်လင်ငယ် […]
​ပျော်​တုန်းက​ပျော်​ပြီး က​လေးရလား​တော့မှ ပစ်​ထားကြတယ်​ မင်းလူဖြစ်ရတာ မတန်ပါဘူး က​လေးရယ်​ ပျော်​ရတာကို သဘောကျပြီးဗိုက်ကြီးတာကို သဘောမကျတဲ့အမေနဲ့ အိပ်ယာပေါ်ကကိစ္စလောက်သာတာဝန်ယူတတ်တဲ့အဖေမျိုးဆီမှာ မင်းလူဖြစ်ရတာ မတန်ပါဘူး ကလေးရယ် ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ် လူသားမဆန်မှု့တွေ မကြာခဏတွေ့မြင်ကြားနေရတယ် အပျော်ကြူးကြတယ် Living together လက်မထပ်ရသေးပဲ အတူနေထိုင်ခြင်းတွေ အလွယ်တကူလုပ်ဆောင်နေကြတယ်… မဖုံးနိုင် […]
ဘိလပ်မြေ ထမ်းပြီး တက္ကသိုလ် ဆက်တက်ရတဲ့ အာဂမိန်းကလေး…/
မိ သား စု စား ဖို့ နေ ရေး အ တွက် ဘ ဝ ကို ရုန်း ကန် နေ ရ တဲ့ အ ချိန် မှာ အ ချို့ အ လုပ် သ […]
ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ပါတယ် ပြောပြောမယူသင့် လက်မထပ်သင့်တဲ့ ယောက်ျား (၈) မျိုး…
စိတ်ထဲကြေကွဲစရာ နာရေးသတင်းလေးပါ . . .
သေနေ့မစေ့သေးသောနေ့ (သို့မဟုတ်) သေကံမပါသေးသော … ည
မင်္ဂလာဆောင်ခါနီး (၁)ရက် အလိုမှာ လိုအပ်တာများသွားဝယ်တဲ့ ဇနီးလောင်း ရင်နာစရာ အဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရ …